प्रियंका जी जीवनलाई असर नपर्ला र ? भिडियोमा शत प्रतिशत गालि गलौजFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
प्रियंका जी जीवनलाई असर नपर्ला र ?
भिडियोमा शत प्रतिशत गालि गलौज
फिल्मी फण्डा । हालै नायक आयुष्मान देशराज श्रेष्ठ जोशीसँग ईन्गेजमेन्ट गरेकी नायिका प्रियंका कार्कीको यतिखेर तिव्र आलोचना र चर्चा भईरहेको छ । आईतवार राजधानीमा संगीता श्रेष्ठले निर्देशन गरेको फिल्म कथा काठमाण्डुको एक गीत रिलिज पछि प्रियंका प्रति दर्शकहरु आलोचित भएका हुन् ।
फिल्म कथा काठमाण्डुको सार्वजनिक गीतमा प्रियंकाले संभवत सबै सिन दिएकी छिन् । उनले नेपाली फिल्ममा हाल सम्म नदिएकी सिन कथा काठमाण्डुमा दिएकी हुन् । प्रमोद अग्रहरीसँग किस सिन देखी अर्धनग्न अवस्थामा बेड सिन सम्म दिएको दृश्य गीतमा समावेश गरिएको छ । यतिखेर प्रियंका अमेरिकामा छिन् । तर उनको हुनेवाला श्रीमान् आयुष्मान देशराज जोशी भने नेपालमै छन् । दशैमा दुबैको विवाह हुने चर्चा छ । के यस्तो दृश्यहरु समावेश भएको भिडियो सार्वजनिक भईरहँदा प्रियंकाको जीवनलाई असर नपर्ला ? त्यो उनैलाई थाहा होला ।
आईतवार सार्वजनिक गरिएको गीतलाई यो समाचार तयार पार्दा सम्म झण्डै २ लाख पटक हेरिएको छ भने ९ सय जति प्रतिक्रिया मिलेको छ । ९ सय प्रतिक्रियामा अधिकांशले प्रियकालाई अपशब्द सहित गालि गलौज गरेका छन् । केही केहीले गायिका ईन्दिरा जोशीलाई समेत गालि गरेका छन् । ९ सयमा ९ वटा जति पनि राम्रो प्रतिक्रिया गीतमा देखिदैन । यस कारण प्रियंकाको यस्तो भिडियो र देखिएको प्रतिक्रियाले उनको व्यक्तिगत जीवनमा कति असर पर्ला, त्यो केही समयमा थाहा हुनेछ ।